J U U Tway Chin Hla Pe by guest9a6643 4571 views
အန်တီမမများ by babycandy007 55662 views
Thoon Myatnoe at Facebook
1. အချစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိမ်ကလေး… မန္တလာမောင်မောင်တုတ်အမေ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ကြောင်း သတင်းကြားရတော့ ခင်ခင်စန်းတယောက်ချုံးပွဲချ၍ ငိုလိုက်မိသည်။ပြီးတော့…….ကြည့်ဦး….အမေယူလိုက်သည်က လူမျိုးခြားကုလားကြီးတဲ့……ဝမ်းနည်းတာလဲပါသည်။ယူကြုံးမရတာလဲပါသည်။ဒါကြောင့်ပင်ခင်ခင်စန်းတယောက် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေး၍နေမိသည်။ လူကြုံနှင့်ပေးလိုက်သော အမေ့ထံမှစာနှင့်အတူ ဖွားလေးအတွက်အိမ်ပြင်ဖို့နှင့်လိုအပ်တာသုံးဖို့ငွေ တစ်သောင်းထည့်ပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ခင်ခင်စန်းအတွက် အဝတ်အစား ဝမ်းဆက် သုံးစုံနှင့်ငွေသုံးထောင်ကလဲသပ်သပ်ပေးလိုက်သေးသည်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အမေတယောက်ချောင်ချောင်လည်လည်ဖြင့် အပူအပင်မရှိ နေနိုင်တော့မည်ဟုတွေး၍ခင်ခင်စန်းတယောက် အနည်းငယ်တော့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားရသည်။ ရန်ကုန်မြှ ပန်လာသော လူကြုံကလည်း ခင်ခင်စန်း၏မိခင်ဖြစ်သူ မအေးသန်းတစ်ယောက် ကောင်းစားနေကြောင်း အမွှန်းတင်၍ပြောရှာပါသည်။ဒါ့အပြင်မအေးသန်းက လူမျိုးခြားကိုယူလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲ ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကကုလားဖြစ်ပေမဲ့ မအေးသန်းကို တော်တော်ပင် ဂရုစိုက်ကြောင်း၊အခုဆိုရင် မအေးသန်းတယောက်ဈေးထဲတွင် ဆိုင်ထွက်စရာပင် မလိုတော့ကြောင်း ပြောပြသဖြင့်တဖက်တလမ်းမှနေ၍ ခင်ခင်စန်းသည် အမေ့အတွက် စိတ်အေးရပါသေးသည်။
2. တကယ်တော့ ခင်ခင်စန်း အသက်က ၁၆နှစ်ဘဲ ရှိသေးသည်။အမေ၏အသက်က ခုမှအသက် ၃၅နှစ်လောက်ဘဲရှိသေးသည်။ခင်ခင်စန်းတို့ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားသည်မှာ၇နှစ်ကျော် ၈နှစ်မျှရှိပြီဖြစ်၍ မအေးသန်းတယောက်ဝမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်ဖြေရှင်းနေရပြီး သမီးဖြစ်သူ ခင်ခင်စန်းကတော့ ခိုကိုးရာမဲ့နေသော သူမ၏ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သော ဖခင်၏မိခင် အဖွားလေးနှင့်အတူ ဒေးဒရဲမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါကလဲ တပင်လဲလို့တပင်ထူတာဖြစ်သောအမေ့ကို အပြစ်ပြောစရာမရှိပေ။ထို့ပြင် မိခင်ဖြစ်သူမှာလဲ ခုမှ ငယ်တုံးရွယ်တုံးဖြစ်သဖြင့်အရွယ်ကောင်းတုန်းဖြစ်ကာ သူလဲ အိမ်ထောင်ပြုချင်ရှာပေမည်ဟု ဖွားလေး၏ဖြေသိမ့်သောစကားများအရလည်း ခင်ခင်စန်း၏ ဝမ်းနည်းစိတ် ယူကြုံးမရသည့်စိတ်များကို တစိတ်တဝမ်း အေးချမ်းစေလေသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ အိမ်ထောင်ပြုသည်ဟု သတင်းကြားပြီးတစ်လကျော်ခန့်အကြာတွင် ရွာတွင်နေသော ခင်ခင်စန်း၏အမဝမ်းကွဲ ဖွားလေး၏တူမတစ်ယောက်ကမိသားစုနှင့်အတူ ဖွားလေး၏အိမ်သို့ ပြောင်းလာကြသဖြင့် ခင်ခင်စန်းသည်ဖွားလေးအတွက် စိတ်အေးရကာ သူမ၏အမဝမ်းကွဲများ ပြောင်းလာပြီး (၁၀)ရက်ခန့်အကြာတွင်တော့ မိခင်ဖြစ်သူထံ တလှည့်တပြောင်း အလည်အပတ်သဘောမျိုးနှင့်သွားရောက်နေထိုင်ရန်အတွက် ခင်ခင်စန်းသည် မိခင်ဖြစ်သူရှိရာ ရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာလာခဲ့လေတော့သည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ အိမ်ရောက်တော့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးသန်းက သမီးဖြစ်သူ ခင်ခင်စန်းကိုဝမ်းသာအယ်လဲ ဆီးကြိုသည့်အတွက် ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် ကြေနပ်သွားရသည်။ထို့ပြင် မိခင်ဖြစ်သူ၏ယောက်ျားပထွေးဖြစ်သူကလဲ လူမျိုးခြားဆိုပေမဲ့ ခင်ခင်စန်းကိုဖေါ်ဖေါ်ရွှေရွှေပင် ဟိုးအရင်ကထဲက ရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေပမာ ဆက်ဆံတော့ ခင်ခင်စန်း
3. တစ်ယောက် ဝမ်းပန်းတသာဖြစ်ရပါသည်။ ပထွေးဖြစ်သူ ကိုမွတ်တားမှာ အသက်(၄၀)လောက် ရှိပြီဖြစ်ပြီးပထန်လူမျိုးလဲစပ်လေတော့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြင့် ကိုယ်လုံးကဗလတောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်သည်။ ခင်ခင်စန်း ရောက်လာသည်ဆိုသည်နှင့် မွတ်တားက ခဏအကြာတွင်အိမ်မှထွက်၍ ဆိုက်ကားသမားကို ဒံပေါက်ဝယ်ခိုင်းကာ ခင်ခင်စန်းကို ကျွေးမွေးခဲ့သဖြင့်ခင်ခင်စန်းရော မိခင်ဖြစ်သူ မအေးသန်းတို့ပါ ဝမ်းသာကြည်နူးခဲ့ရသည်။ညနေစာကိုဒံပေါက်ထမင်းဖြင့် သုံးယောက်သား စားပြီးကြသောအခါတွင်လည်း ကိုမွတ်တားကဒီအိမ်မှာပင် ခင်ခင်စန်းအပြီးပြောင်းလာပြီး သားအမိနှစ်ယောက်အတူတူနေရန်နှင့်ဒေးဒရဲတွင် ကျန်ခဲ့သော ဖွားလေးအတွက်လည်း လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးရန်စီစဉ်ပြောကြားခဲ့သဖြင့် ခင်ခင်စန်းတို့သားအမိနှစ်ယောက်စလုံး ကိုမွတ်တား၏စကားကိုခေါင်းငြိမ့်ပြခဲ့ရလေသည်။ပြီးတော့လဲ သားအမိ နှစ်ယောက်စလုံး၏ရင်ထဲတွင်လည်းကိုမွတ်တားကိုကြိတ်၍ ကျေးဇူးတင်နေမိကြသည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် ကုတင်ခေါင်ရင်းဖက်ရှိမပိတ်ရသေးသော ပြူတွင်းပေါက်မှနေ၍လေတစ်ချက်ဖြူးဖြူးလေး ဝင်၍အလာတွင် အသက်ကိုဝအောင်တစ်ချက်ရှုလိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်တွင် လှဲလျှက် အိပ်မပျော်နိုင် ဖြစ်နေရာမှသူမ၏ကိုယ်လုံးကိုတစ်စောင်းလေးလှဲလိုက်ကာ ပြူတင်းပေါက်ကို လှမ်းမျှော်၍ ကြည့်လိုက်သည်။အပြင်ဖက်တွင် လမင်းမှာ ထိန်ထိန်သာလျှက်ရှိသည်။ခါတိုင်းလို အချိန်များကဆိုလျှင်ခင်ခင်စန်းအမေ့အိမ်သို့ ရောက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊အမေက ခင်ခင်စန်းရှိရာသို့ရောက်လျှင်သော်၎င်း၊သားအမိနှစ်ယောက်အတူ အိပ်နေကျဖြစ်သည်။ခင်ခင်စန်းအဖို့အလွန်ပင် ပျော်စရာကောင်းလှသည်။အခုတော့ တစ်ယောက်ထဲအိပ်နေရတာမို့
4. ခင်ခင်စန်း၏ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာဖြစ်နေရသည်။ ညကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို တိတ်ဆိတ်၍နေရအောင်ဖန်တီးထားလေတော့ တဖက်ခန်းမှ တရှုးရှုး၊တရှဲရှဲနှင့်နှစ်ယောက်သားတိုးတိုးလေးပြောနေကြသော စကားသံလေးများသည် တခါတရံ ခင်ခင်စန်းဆီသို့ရောက်၍လာတတ်ပါသည်။ အစကတော့ ဖာသိဖာသာပင်ဖြစ်သော်လည်း နောက်တော့ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် နားစွင့်မိသည်။ဒီလိုနားစွင့်မိရာမှ ခင်ခင်စန်းသည် တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလာမိသည်။ဒါကတော့ မိမိ၏မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ပထွေးဖြစ်သူ ကုလားကြီးတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုပင် ဖြစ်သည်။ဒါကိုတော့ ခင်ခင်စန်းသိလိုလှပါသည်။ ထိုကြောင့် ခင်ခင်စန်းသည် အိပ်ယာပေါ်မှ လူးလဲထ၍ နံရံဆီသို့သွားသည်။ပြီးတော့ နံရံတွင်တွေ့ရသောအပေါက်သေးသေးလေးမှနေ၍ တဖက်ခန်းဆီသို့ချောင်းကြည့်လိုက်ပါသည်။ထိုအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်း၏ရင်ထဲတွင်ဖို၍ သွားရသည်။သူတို့အခန်းထဲတွင် ထွန်းထားသော နှစ်ပေ မီးချောင်း၏အလင်းရောင်က လင်းလင်းကြီးဖြစ်၍နေသည်။ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာတော့ မွတ်တားက မိမိအမေ၏ကိုယ်ပေါ်မှာ ခွထားပြီးပါးကိုနမ်းနေသည်။ဒါကိုတွေ့ရသည်ကပင် ခင်ခင်စန်းအဖို့ ရင်ထဲမှာဝေဒနာကလေးတမျိုးအဖြစ်နဲ့ ခံစားနေရပါသည်။တကယ်တော့ ခင်ခင်စန်းသည်တခါတရံမျှ မတွေ့ဖူးသော မကြုံဘူးသော အဖြစ်ကလေးကို တွေ့ကြုံမြင်တွေ့ရသည်မဟုတ်ပါလား။ ခင်ခင်စန်းသည် မျက်တောင်မခတ်ဘဲ စူးစိုက်ကြည့်နေမိပါတော့သည်။အပေါက်ကလေးကသေးတော့လဲ အားမရပါ။ထို့ကြောင့် အပေါက်ချဲ့ရန် တခုခုကိုရှာဖွေပါသည်။မတွေ့ရတော့ ခင်ခင်စန်းက စိတ်ပျက်သွားသည်။
5. ထို့ကြောင့် နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး အသာလေးမှိန်းနေလိုက်ရာ အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားပါတော့သည်။ခင်ခင်စန်း ဘယ်အချိန်ထိ မှေးမှိန်းနေသည်မသိ။မိမိ၏အိပ်ခန်းလေးမှာ တသိမ့်သိမ့်ခါနေသည်ကို သိရသောအခါမှ ခင်ခင်စန်းလန့်ပြီးနိုးသွားပါတော့သည်။ထိုအချိန်တွင်တော့………. “……ဖွတ်…….ဖွတ်………ဖွတ…….”်ဟူသော အသံမှာလဲ တဖက်ခန်းမှ ဆူညံပြီး ပေါ်လာပါသည်။ခင်ခင်စန်းစိတ်ပူသွားပါသည်။ကုလားကြီးက မိမိ၏မအေအား စိတ်ဆိုးပြီးနရင်းအုပ်နေပြီလားဆိုသော အချက်ကိုတွေးမိပြီး ရင်တုံသွားသည်။ထို့ကြောင့်ကပျာကသီပင်ထ၍ စောစောက အပေါက်လေးကပင်ချောင်းကြည့်လိုက်သောအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာ တကိုယ်လုံး ကြက်သီးများပင်တဖျန်းဖျန်းနဲ့ထသွားလေသည်။မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းသည် မိမထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ တခါမျှမကြုံဘူးလေသော မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။မိမိ၏မိခင်မှာ ကိုယ်တွင်အဝတ်တစုံတရာမျှ မကပ်သလို မွတ်တားကြီးမှာလဲ အဝတ်အစားလုံးဝပင် မကပ်ပါ။ပြီးတော့ မိမိ၏မိခင်က ခြေနှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ်သို့မြောက်ထားပါသည်။မွတ်တားကြီးကတော့ ပေါင်နှစ်ခုကြားမှနေပြီး အားရပါးရ ဆောင့်၍နေသည်ကို တွေ့ရသောအခါတွင်တော့ခင်ခင်စန်းအဖို့ အလွန်ပင် တုန်လှုပ်သော ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသည်။ဘာများလုပ်နေပါသလဲဟူသော အတွေးကိုလဲ တွေးနေမိသည်။ မွတ်တားကြီးက ဖွတ်….ဖတ်……ဖွတ်…ဟု မြည်အောင်ဆောင့်လိုက်တိုင်း မအေးသန်းသည် မွတ်တားကြီး၏လည်ပင်းကို အားရပါးရဖက်ထားသည်ကို ခင်ခင်စန်းက တွေ့ရပါသည်။ထိုအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာအိပ်ချင်စိတ်များပင် ပျောက်၍ သွားရပါသည်။ ချောင်းကြည့်ရသည်မှာ အရသာတွေ့နေသလိုပင် ဖြစ်နေပါသည်။
6. သူတို့နှစ်ဦးကတော့ သဲသဲမဲမဲပင်။ခင်ခင်စန်းက မွတ်တားကြီး ထိုးသွင်းသောအပေါက်မျိုးကို မိမိကိုယ်တွင် မွတ်တားကြီး ထိုးသွင်းသောနေရာမျိုးကိုလက်ဖြင့်စမ်းလိုက်ရာ ခင်ခင်စန်းသည် မိမိစောက်ဖုတ်ကိုလက်ဖြင့်စမ်းလိုက်မိလေသည်။ တခါတရံတွင် အိမ်မှာ သိမ့်သိမ့်တုန်သွားသည်။ခင်ခင်စန်းကတော့မိမိကိုယ်ကိုစမ်းပြီး အပေါက်ချဲ့ထွင်ရန် စဉ်းစားနေမိသည်။ “…..ဖွတ်….ဖွတ်……ဖွတ……ဖတ်……ဖတ်…..”်အသံမှာညံပြီး မြည်လို့ပင်ထွက်လာပါတော့သည်။ထိုအခါတွင်တော့ မအေးသန်းသည်သူမ၏ဖင်ကြီးကို ကော့ကာ ကော့ကာပေးလိုက်ပါ၏။မွတ်တားကြီးကတော့အားရပါးရလေးပင် ဆောင့်သွင်းနေပါတော့သည်။ ပြီးတော့ မွတ်တားကြီးက အငြိမ်မနေပါ။လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မအေးသန်း၏နို့နှစ်လုံးကို အားရပါးရဆုတ်နယ်လိုက်ပါတော့သည်။မအေးသန်းကတော့မွတ်တားကြီးကို တအားပင် ဖက်ထားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ထို့နောက် မအေးသန်း၏နှုတ်ခမ်းကို မွတ်တားကြီးက စုပ်ယူသည်။ပြီးတော့နို့သီးထိပ်ကို စုပ်ယူသည်။သူတို့နှစ်ဦးက အလုပ်များနေပါတော့သည်။ထိုအခါတွင်တော့ခင်ခင်စန်းမှာ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ရဲဘဲ ငြိမ်ပြီးတော့ အသာလေး ချောင်းနေသည်။တလောကလုံး တိတ်ဆိတ်၍နေစဉ်မှာပင် အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲရှိ သံစုံနာရီကြီးကတိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။ “…….မအေး…..” “…….ရှင်……”
7. “…..အားကြီးချစ်တယ်လား…..ကိုမွတ်တားကို…..”“……ချစ်တယ်……ချစ်တယ်………ကိုမွတ်တားကို မအေးအားကြီးချစ်တာဘဲ…”မအေးသန်းက ဤသို့ချစ်ရေးပြန်၍ကြူလိုက်သည်။ထိုအခါတွင်တော့ ကိုမွတ်တားကမအေးသန်း၏နို့ကို ဆွဲကာဆောင့်ပြန်သည်။ဤတခါတွင်တော့ အဆောင့်မြန်သည်ဟုခင်ခင်စန်းကထင်ပါသည်။ဟုတ်ပါသည်။အလွန်ပင် ဆောင့်ချက်တွေကမြန်ဆန်နေပါ၏ ငါးမိနစ်ကျော် ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီး၏ဆောင့်ရှိန်မှာနှေး၍လာသည်။အတင်းဖိသွင်း၏။တွန့်လိန်လို့လဲသွား၏။မအေးသန်း၏ပါးကိုလဲ ရွှတ်ကနဲနေအောင် နမ်းလိုက်သည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးမှန်း မသိသောခံစားမှုဖြင့်အနေရခက်နေပါတော့၏။ဟုတ်ပါသည်။တကယ်တော့ အနေရခက်နေပါပြီ။ဘာကိုခံစားရသည်တော့ မသိပါ။မျက်စိထဲမှာတော့ တစ်မျိုးကြီးပင်ဖြစ်လို့နေသည်။ခင်ခင်စန်းသည် မျက်လုံးကိုခွာပြီး သက်ပြင်းကို တိုးတိုးလေးချလိုက်ပြီးနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး စဉ်းစားလိုက်ပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် တအိမ်လုံး ညိမ်သက်လို့နေသည်။ခင်ခင်စန်းသည်အာသာမပြေသေးဘဲ လူးလဲထကာ အပေါက်ဆီသို့ မျက်စိရောက်သွားပြန်သည်။ထိုအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးသွားရသည်။အကြောင်းကတော့မွတ်တားကြီး၏လီးချောင်းကြီးကို မိခင်ဖြစ်သူ မအေးသန်းက တယုတယနှင့် အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပေးနေသည်။မွတ်တားကြီး၏ လီးချောင်းကြီးမှာ မဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်ပြီးရှစ်လက်မနီးပါးခန့်ရှည်သည်။ မွတ်တားကြီးရော မအေးသန်းပါ အဝတ်ပင် မဝတ်ကြသေးပါ။ခင်ခင်စန်းကကြက်သီးပင်ထ၍သွားသည်။တကယ်တော့ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် တစ်သက်နှင့်တကိုယ်မှာ ဤလိုအချောင်းကြီးမျိုး တခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့ပေ။ခင်ခင်စန်းကတော့
8. အသက်ပင် ရဲရဲ မရှုရဲဘဲအပေါက်မှနေ၍ စူးစိုက်ပြီးချောင်းမြောင်းနေပါသည်။ သူမဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး ထိုသို့မြင်ရတော့လဲ စိတ်ထဲမှာမရိုးမရွဖြစ်နေမိပါသည်။ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် ရုတ်တရက်အပေါက်မှ မျက်လုံးကိုခွာလို့မရခဲ့ပါ။ အတန်ကြာအောင် စူးစိုက်လို့ကြည့်နေပြီး သက်ပြင်းကို အခါခါချနေမိသည်။ရင်ထဲမှာ တဒိတ်ဒိတ်ခုံမြည်လို့နေသည်။ဘယ်သို့သော ဝေဒနာမျိုးပါနည်း။ခင်ခင်စန်းအဖို့ကတော့ အဖြေရှာလို့မရတော့ပါ။ ဒါတွေဟာ အရသာတွေလား။ခင်ခင်စန်းကသူမစိတ်ထဲမှာထင်တာတွေကို ရှောက်တွေးနေသည်။ဟုတ်ပါ၏။တကယ်တော့တွေးစရာပင် မဟုတ်ပါလား။ ခင်ခင်စန်း၏စိတ်ထဲတွင် ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်တော့မသိပါ။နောက်ဆုံးတော့ ထိုအပေါက်ချဲ့ထွင်ရေးထက် ချောင်းမြောင်းရေးက သူမအတွက်ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ခင်ခင်စန်းသည် အပေါက်လေးကို မချဲ့ဘဲ ဒီအတိုင်းဘဲ အားရပါးရချောင်းပါသည်။တဖက်ခန်းအတွင်းမှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာမျှအရေးမစိုက်တော့သည့်အလားပင် ဖြစ်ချင်တာများဖြစ်နေကြပါတော့၏။“……မအေး….” “……ရှင်……ကိုမွတ်တား……”“…..မောသလား…….ဟင်….” “……ဟင့်အင်း….မမောပါဘူး…..”“……ဟဲ….ဟဲ…..မအေးက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာဘဲ…..”မွတ်တားကြီးက ဒီလိုပင်ညုပြီး သူ့မိန်းမ မအေးသန်းကို နမ်းလိုက်သောအခါတွင်တော့မအေးသန်းက…………….“…….ဟင်း……ဒါပဲနော်…….ကိုမွတ်တား…….နောက်ဆိုအူကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့….”
9. ပြောပြောဆိုဆို မအေးသန်းက မွတ်တားကြီး၏လီးချောင်းကြီးကိုဆွဲ၍ကလိလိုက်သောအခါတွင်တော့ တုတ်ဖြိုးသွယ်လျသော မွတ်တားကြီး၏လီးချောင်းကြီးမှာ တမုဟုတ်ချင်းပင် ထောင်၍ထလာသောအခါတွင်တော့ချောင်းကြည့်နေသော ခင်ခင်စန်းပင် လန့်ပြီးသွားရသည်။ဟုတ်ပါသည်။အလွန်လန့်စရာကောင်းသော အရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်လဲ မအေးသန်းကမွတ်တားကြီးကို အသဲစွဲနေရသည်မဟုတ်ပါလား…………..။ “…..မအေးကိုလေ……ကိုမွတ်တား…..ဘယ်တော့မှ….မပစ်ဘူး……စိတ်ချ…..”မအေးသန်းကတော့ အားရကြေနပ်စွာနှင့်ပြုံးပြီး မွတ်တားကြီး၏လီးချောင်းကြီးကိုသုံးလေးချက်ပင် ဂွင်းဆောင့်သလို ဆောင့်ပေးလိုက်သောအခါတွင်တော့မွတ်တားကြီးမှာ မနေနိုင်တော့ဘဲ မအေးသန်းကို တဲ့တဲ့အိပ်စေပြီး သူကအပေါ်မှထိုင်ကာ မအေးသန်း၏မို့မောင်နေသော စောက်ဖုတ်ကို သေချာစွာ ကြည့်နေပါ၏။မအေးသန်း၏မျက်နှာလေးမှာ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းနေပြီး ကြွရွနေသောနို့နှစ်လုံးကလဲ တောင်ပူစာကလေးနှစ်လုံးပမာ မို့မောက်နေပါ၏။ပြီးတော့ အောက်သို့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်နှစ်လုံး၏ထိပ်မှာ မို့မောက်အုံကြွနေသောစောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးပြီး လာပါ လာပါ ကိုမွတ်တားရယ်ဟု ခေါ်နေသယောင်ယောင်ဖြစ်နေသည်။ပြီးတော့ အမွှေးမဲမဲတွေက ထိပ်မှာစုပြီးနေကာ အက်ကွဲလုရှိနေသောအကွဲကြောင်းလေးက ပြူးအက်လို့နေပါသည်။ ထိုအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီးက မအေးသန်း၏ဒူးနှစ်လုံးကို အပေါ်သို့မြောက်ပေးလိုက်ပြန်၏။ထိုအခါ မအေးသန်း၏အဖုတ်မှာကြွပြီးမြောက်တက်လာပါသည်။မွတ်တားကြီးက အသင့်ထားရှိသော အိပ်ရာနံဘေးမှအခုတစ်ခုကိုယူပြီး မအေးသန်း၏ဖင်အောက်ကို ထိုးပြီးခုပေးလိုက်ပါသည်။ထိုသို့ခုပေးပြီးသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီးက သူ၏လီးချောင်းကြီးကိုကိုင်ပြီးအသာကလေးပင် မအေးသန်း၏အဖုတ်အတွင်းသို့ သွင်းလိုက်သောအခါတွင်
10. မအေးသန်းသည် မျက်လုံးလေးများမှေးပြီးကျသွားပါတော့သည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ ချက်ချင်းပင် ရင်ထဲမှာ မော၍လာရသည်။ပြီးတော့သူမ၏အဖုတ်ကို သူမလက်နှင့်ပြန်စမ်းလိုက်မိပါသည်။ကြက်သီးများပင် တကိုယ်လုံးထသွားရှာရသည်။ဟုတ်ပါသည်။တကယ်တော့ ခင်ခင်စန်းအဖို့ကြက်သီးထစရာပင်။ဒီမျှလောက်ကြီးမားသော လီးချောင်းကြီးက အဖုတ်အတွင်းသို့ဝင်သွားခြင်းသည် ကြောက်စရာ လန့်စရာကြီးပင်မဟုတ်ပါလား။ ခင်ခင်စန်းက မိမိအဖုတ်ကို ကိုင်ပြီး ငေးမောနေမိသည်။မွတ်တားကသူ၏လီးကြီးကို အသာလေး ထိုးသွင်းဆွဲထုတ်နှင့် အလုပ်များနေပါသည်။ခဏအကြာတွင်တော့ မွတ်တားက ကြမ်း၍လာပါပြီ။သူ၏လီးကြီးကို တအားဆောင့်၍နေသည်။ “……ဖွတ်……ဖတ်…….စွတ်……ဖွတ်……”ဟူသောအသံတွေမှာ ဆူညံ၍နေသည်။မအေးသန်းကတော့ လူးလွန့်ပြီး အရသာကိုခံစားနေသည်။မွတ်တားက နင်းကန်ဆောင့်လိုက်သောအခါတွင်တော့……….“……အို…..ကျွတ်….ကျွတ်…..အား……ကိုမွတ်တားရယ်…..ဆောင့်ပါ…..သိပ်ကောင်းတယ်……အား…..”“………..ဟဲ…..ဟဲ…………ကောင်းတယ်လား…….”“……..ကောင်းတယ်…….ဟင့်….”ထိုအခါတွင်တော့ မွတ်တားက နင်းကန်၍ဆောင့်ပေးသည်။မအေးသန်းကတော့အရသာတွင်းထဲမှာ လူးပျံ၍နေတော့သည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ အဖြစ်အပျက်များကို မျက်တောင်မခတ်နိုင်တော့ဘဲရှိနေသည်။ဘယ်လိုအရသာဖြင့် ဘယ်လိုကောင်းပါလိမ့် ဟူသောအတွေးများကိုတွေးပြီးသောအခါတွင် စိတ်မောလူမောဖြင့် အိပ်ယာပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်
11. ပါတော့သည်။ပြီးတော့ ခင်ခင်စန်း၏မျက်လုံးလေးတွေက စင်းပြီး ကျသွားရရှာသည်။မကြာမှီမှာပင် ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် အိပ်ပျော်၍သွားရလေတော့သည်။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ဤနေ့အဖို့ကတော့ ခင်ခင်စန်းအဖို့ထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်နေပါသည်။မိခင်ဖြစ်သူမအေးသန်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဈေးသို့ကဗျာကသီ ထွက်၍သွားသည်။ မွတ်တားက အ်ိမ်ရှေ့တွင် ထိုင်ကာသတင်းစာဖတ်၍နေသည်။ထိုအချိန်တွင်ခင်ခင်စန်းက မွတ်တားအနီးမှ ဟန်တစ်မျိုးနှင့်ဖြတ်၍လျှောက်သည်။ မို့မောက်နေသော ရွှေရင်အစုံ၊လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြင့်ဖြစ်နေသော တင်ပဆုံ တပွေ့တပိုက်ကြီးတို့ကို မွတ်တားက သူ့လက်ထဲမှာသတင်းစာကို ကျော်၍ အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် ကြည့်နေမိသည်။ ပြီးတော့မွတ်တား၏စိတ်မှာလဲ မရိုးမရွဖြစ်၍လာရသည်။ဟုတ်ပါသည်။ခင်ခင်စန်းကလဲ မွတ်တားကြီးစိတ်မရိုးမရွဖြစ်လာအောင် လုပ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။“…….ဦးလေး…….ကော်ဖီသောက်မလား……”“…..အေး……သောက်တာပေါ့…..”ခင်ခင်စန်းက ရေချိုးရန်အတွက် အင်းကျီများကိုချွတ်ပြီး ထဘီရင်ရှားနှင့်သဘက်ပိုင်းလေးကို မလုံ့တလုံလေး ခြုံပြီးတော့ မွတ်တား၏အနားသို့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီး ကော်ဖီမစ်သောက်ရန် မေးလာပါသည်။ ထိုအခါတွင် မွတ်တားက သောက်ရန်အဖြေပေးသဖြင့် ခင်ခင်စန်းက ကော်ဖီကိုသွားထည့်ပြီး မွတ်တားဆီသို့ ပြန်လာကပေ၏။မွတ်တားကတော့ ခင်ခင်စန်း၏ရွှေရင်အုံဆီသို့ မျက်လုံးပြူးပြီး ကြည့်နေပါသည်။အင်းကျီချွတ်ထားပြီး ထဘီရင်ရှားဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့် ဝါဝင်းနေသော ခင်ခင်စန်း၏အသားတို့မှာ မွတ်တား၏မျက်လုံးထဲတွင်
12. နုပျိုလန်းဆန်းကာ လှချင်တိုင်း လှနေသည်။ထိုအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာဝေဒနာတစ်မျိုးကို ခံစားလိုက်ရပါသည်။“…..အဟင့်…..ကိုမွတ်တားကြီးကလဲ……”မွတ်တားက သူမကို ကြည့်လျှက်က ကော်ဖီခွက်ကို စားပွဲပေါ်သို့တင်ပြီးမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ပြီးတော့…………………….“……ခင်စန်းက သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးဘဲ….ကိုမွတ်တားကတော့ခင်စန်းကို သိပ်ချစ်နေမိတယ်…….”မွတ်တားက ပြောပြောဆိုဆို ခင်ခင်စန်း၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်ပါသည်။ပြီးတော့ ခင်စန်း၏နှုတ်ခမ်းသားကို လျင်မြန်စွာပင်စုတ်လိုက်ပါသည်။လက်တစ်ဖက်ကလည်း ခင်ခင်စန်း၏ရွှေရင်အုံပေါ်သို့ လမ်းလိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းလေးများကို ဆုတ်ချေပေးနေပါသည်။ကျန်လက်တစ်ဖက်ကမူ ခင်ခင်စန်း၏စောက်ဖုတ်အစိလေးကို ထဘီပေါ်မှနေ၍ပွတ်ဆွဲကလိပေးနေပါသည်။ကိုမွတ်တားကြီး၏အကိုင်အတွယ် ညက်ညောမှုကြောင့် အပျိုရိုင်းကလေး ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက်ဖီလင်များ တက်လာပါသည်။“…….ပေါင်ကိုနဲနဲကားပေးပါလား………ခင်ခင်စန်း….”“…..ဟင့်အင်း……ကြောက်တယ်….”“…….မကြောက်ပါနဲ့ ကောင်းတယ်….ကား….”“……ဟင့်အင်း…..”ခင်ခင်စန်းကဒါဘဲပြော၏။ထိုအခါတွင်တော့ မွတ်တားက ပြုံးလို့သာနေသည်။မွတ်တားက ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကို တွေးနေပါသည်။
13. မွတ်တားက သူ၏လီးချောင်းကြီးကို ခင်ခင်စန်း၏အဖုတ်အပေါ်နားသို့ ထောက်၍ကပ်ပေးထားသည်။ပူနွေးသော အတွေ့က ခင်ခင်စန်း၏စိတ်တွေကို လှုပ်ရှားလာစေပါတော့သည်။ အတန်ကြာသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားက ခင်ခင်စန်း၏ခါးကိုကလိလိုက်ရာ ခင်ခင်စန်းမှာ ယောင်ပြီးလူးလွန့်သွားသဖြင့် သူမ၏ပေါင်ဖြူဖြူလေးနှစ်ချောင်းမှာ ကား၍ထွက်သွားပါတော့သည်။ထိုအခါတွင် အကွက်ကောင်းကိုစောင့်နေသော မွတ်တားက ချက်ခြင်းပင် ခင်ခင်စန်း၏ပေါင်ကြားထဲသို့ဝင်လိုက်သောအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ချေ။ မွတ်တားက ခင်ခင်စန်း၏နို့ကို ငုံကာစို့ပြီးတော့ ခင်ခင်စန်း၏ အဖုတ်ဝကိုတေ့လိုက်သောအခါ ခင်ခင်စန်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘဲ တဆတ်ဆတ်တုန်နေမိတော့သည်။မွတ်တားက အသာလေးပင် ချော့ကာ ချော့ကာဖြင့်သွင်းပါသည်။ဟုတ်ပါ၏။ခင်ခင်စန်းလို နုနုနယ်နယ်လေးက အသွင်းရခက်ပါသည် မဟုတ်ပါလား။ခဏအကြာမှာပင် မွတ်တားကစိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်လာသည်။ခင်ခင်စန်း၏ပေါင်နှစ်လုံးကို အပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။ထိုအခါတွင် ခင်ခင်စန်း၏အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးက ပို၍ဟသွားသည်။ဤအခိုက်အတန့်မှာပင် စိတ်မထိန်းနိုင် ဖြစ်၍သွားရသော မွတ်တားက ဖိပြီး ဆောင့်ထိုးလိုက်ရာ“……အမလေး….အမေ့…….ကျွတ….ကျွတ……အမလေး……နာတယ်…..အဟီး.”်ခင်ခင်စန်းမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်တော့ မသိပါ။မျက်ရည်များပင်ဝေကာ မွတ်တား၏ရင်ဘတ်ကို အတင်းပင်တွန်းထားလိုက်မိသည်။ “……မရုန်းနဲ့…..ကန်မလေး……..ရုန်းရင်နာတယ်…..”ခင်ခင်စန်းကတော့ ချက်ချင်းပင် စိတ်ကုန်သွားပါ၏။ဘာအရသာလဲ ဘယ်မှာကောင်းလို့လဲ ဟုတွေးမိလိုက်ပါသည်။မွတ်တားကတော့ အဆုံးထိဝင်သွားသဖြင့်
14. ကြေနပ်သွားရသည်။ ခင်ခင်စန်းမှာ နာကျင်မှုကိုခံစားနေရပြီး မလှုပ်မယှက်သာဖြစ်နေပါတော့သည်။မွတ်တားက အသာငြိ်မ်နေပြီးမှ ခင်ခင်စန်း၏နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူမ၏နို့တွေကို ဆုတ်နယ်ချေမွ၍ ပေးလိုက်သေးသည်။ နို့သီးလေးကို ငုံ့၍ စို့ပြီးတော့ အသာလေး ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ထွက်နေသော အရည်တို့ကြောင့် ကောင်းလာသည်။ချောင်လာသည်။ဘယ်လိုအရသာမျိုးမှန်းမသိသော အရသာမျိုးကို ခံစားနေရသည်။ ထိုအခါမှပင် ခင်ခင်စန်းက မွတ်တားအား တွန်းဖယ်ပစ်ရမည့်အစား ဖက်၍ထားလိုက်မိပါတော့သည်။ခင်ခင်စန်းမှာ လေးငါးကြိမ်မျှ ကျင်တက်သွားကာနတ်ပြည်သို့ ရောက်နေသလားဟုပင် ထင်မှတ်နေရသည်။ထိုအခါမှ အရသာကိုသိလာရသည်။မွတ်တားကတော့ စိတ်ရှိသလိုပင် ဆောင့်၍နေသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် နာရီမှ ကိုးနာရီ ထိုးသံကြားလိုက်ရသည်။သူ့အမေကိုးနာရီလောက် ပြန်ရောက်မည်ဟု မှာသွားသည်။“…….ဟော…….မေမေပြန်လာတော့မယ်……”ထိုအခါကျမှ မွတ်တားက ကပျာကသီဖြင့် ဆင်းလိုက်သည်။ခင်ခင်စန်းကတော့ဂမူးရှုထိုးနှင့် ရေချိုးခန်းဆီသို့ ပြေး၍ထွက်သွားပါလေတော့သည်။တကယ်တော့မွတ်တားက အေးသန်းသိသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ပါ၏။မအေးသန်းက(၉)နာရီကျော်သည်နှင့်ဈေးမှ ကဗျာကသီနှင့်ပြန်လာသည်။ပြီးတော့ ဝတ္တရားမပျက်ပင် ချက်ပြုတ်ရပါ၏။ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက်ကတော့ ရေချိုးရင်းဖြင့် ပူစပ်ပူလောင်နှင့် ဝေဒနာတစ်ရပ်ကို ခံစားနေရသည်။ဘာကြောင့် မိမိသည် မွတ်တားကြီး၏ ချယ်လှယ်ခြင်းကို
15. ခံလိုက်ရပါသနည်း။ခင်ခင်စန်းသည် အတွေးများတွေးပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်နေမိသည်။ထိုအချိန်တွင် မွတ်တားကလဲ ရင်ထဲမှာ တထိတ်ထိတ်ဖြင့် သတင်းစာကို ဖတ်၍နေသည်။အကယ်၍ မအေးသန်းသိသွားလျှင် မီးပွင့်သွားမည်မဟုတ်ပါလား။တော်ပါသေးသည်။ထိုနေ့မှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင် ဖြစ်သွားသည်။ ညမိုးချုပ်သောအခါတွင်တော့ မွတ်တားက အားဖြစ်စေသည့်ဆေးနှင့်စိမ်ထားသော အရက်ကိုသောက်သည်။ပြီးတော့ ညနေပိုင်းက မအေးသန်းဂရုတစိုက်လုပ်ပေးထားသော ကြက်ဥဟတ်ဘွိုင် ပူပူနွေးနွေးကို နွားနို့ဖြင့်သောက်ထားသေးသည်။ဒါမှ အားရှိမည်မဟုတ်ပါလား။ ထို့နောက်တွင်တော့ ခင်ခင်စန်းက အိပ်ရာထဲသို့ အစောကြီးဝင်ပြီးနောက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးကျောချမ်းနေမိသည်။တကယ်ကျောချမ်းစရာပင်မဟုတ်ပါလား။ပထမတော့ နာကျင်သောဝေဒနာကိုခံစားရပါသည်။နောက်တော့ ဘယ်လိုအရသာမှန်းမသိသော အရသာမျိုးကို ခင်ခင်စန်းခံစားရသည်။ခင်ခင်စန်းသည် မွတ်တားကို သတိရလျှက် နေရလေတော့သည်။ ဒီညအဖို့တော့ ခင်ခင်စန်းသည် ဘယ်လို အိပ်ရမည်ကို တွေးလို့မရပါ။ဤသိုဖြင့်တဖြေးဖြေးပင် အမှောင်ထုသည် ကြီးစိုး၍လာရလေသည်။ဤညတော့ ခင်ခင်စန်းသည်မနေ့ကညလို မီးမထွန်းတော့ပါ။အသံကိုလဲ လုံးဝမပြုဘဲ တိတ်တိတ်ကလေးပင်နေခဲ့သည်။ အားဆေးစိမ်ထားသော အရက်ကိုသောက်နေသော မွတ်တားကမအေးသန်းကို အတင်းတိုက်တွန်း၍ အရက်ကို သောက်ခိုင်း၏။ မွတ်တားကမအေးသန်းကို ချော့မော့၍ သုံးလေးခွက်မျှတိုက်ပြီးသောအခါတွင်တော့ အိပ်ခန်းဆီသို့မွတ်တားကခေါ်၍သွားလေတော့သည်။ မအေးသန်းသည် အရက်ရှိန်လေး နဲနဲရလာသောအခါတွင်တော့ သူမ၏
16. သွေးသားတွေမှာ သောင်းကျန်းလာသည်။ထိုအခါတွင် မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးကိုသူမသည် ဆွဲကာကစားနေပါတော့သည်။ထိုအချိန်တွင် မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးမှာထောင်းကနဲ ထောင်တက်လာသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီးက ဝတ်ထားသောအဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ မအေးသန်း ဝတ်ထားသော အဝတ်များကိုလဲ မွတ်တားကြီးကကဗျာကသီနှင့် ချွတ်လိုက်ပါသည်။မကြာမှီမှာပင် မအေးသန်း၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကိုယ်လုံးတီးကြီးမှာ မွတ်တား၏ရင်ခွင်ထဲတွင် ပျော့ပြောင်း၍ပါလာတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ချောင်းကြည့်နေသော ခင်ခင်စန်းမှာ တကိုယ်လုံးပူထူဖိန်းရှိန်းလို့လာသည်။ရင်ထဲမှာလဲ ဟာတာတာကြီးနှင့် တခုခုကိုလိုချင်သောဆန္ဒများက ပြင်းပြနေမိသည်။ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော အပေါက်မှ မျက်လုံးကမခွာနိုင်တော့ပါ။ခင်ခင်စန်းကတော့ ရင်ကလေးမောနေရှာပါသည်။ မွတ်တားသည် မအေးသန်း၏ပါးကို ရွှတ်ကနဲမြည်အောင်နမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ မအေးသန်း၏နို့ကြီးတွေကို ဆုတ်နယ်လို့ပေးနေသည်။ထိုအချိန်တွင်မအေးသန်းက တအင်းအင်းဖြင့် အာသာပြင်းပြလို့နေပါတော့သည်။ထို့ကြောင့်ပင်မအေးသန်းက မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးကို ဆွဲပြီး သူမအဖုတ်ရှိရာသို့ ခေါ်နေပါသည်။ မွတ်တားကတော့ ထုံးစံအတိုင်းကလိ၍နေသည်။အတန်ကြာသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီးသည်ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ပြီးတော့မအေးသန်း၏တင်ပါးကို ကုတင်စောင်းသို့အသာလေးဆွဲယူလိုက်သောအခါတွင်တော့မအေးသန်းမှာ အလိုက်သင့်လေးပင်ပါ၍လာတော့သည်။ မွတ်တားက မအေးသန်း၏ခြေနှစ်ချောင်းကိုပုခုံးပေါ်တင်လိုက်သောအခါတွင်တော့ မအေးသန်း၏မို့ခုံးနေသော အဖုတ်သည်မွတ်တား၏ မာတောင်၍နေသောလီးချောင်းကြီးနှင့်တဲ့တဲ့မတ်မတ်ဖြစ်၍သွားသည်။
17. ထိုအခါတွင်တော့ မွတ်တားကြီးက တည့်တည့်မတ်မတ်ပင် ချိန်ရွယ်ပြီး ဆောင့်၍သွင်းလိုက်တော့သည်။“….အင်း…..ကျွတ်….ကျွတ်……ကျွတ်…….ကိုမွတ်တားဆောင့်ပါကွယ်……”မအေးသန်းကတော့ ဘာကိုမှ ဂရုမပြုနိုင်တော့ပါ။သူမ၏ပြင်းပြနေသော လိုအင်ဆန္ဒကိုသာလျှင် စေပြီးတော့ တဟင်းဟင်းနှင့်တဏှာဇောတွေကြွနေပါသည်။ “……ကောင်းလား……မအေးသန်း…”“…..ကောင်းတယ်……..ကိုမွတ်တား….”မအေးသန်းကတော့ ဒီလိုပင်အဖြေပေးလိုက်သည်။ထိုအခါတွင်တော့မွတ်တားကြီးကတော့ အားရပါးရ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဆောင့်ပါတော့သည်။“….ဖွပ်…..ဖွတ်……ဖတ်….ဖတ်…….ဗြစ်…..” ဟူသော အသံတို့မှာ တအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါတော့သည်။ထိုအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာ စိတ်မငြိမ်နိုင်ဘဲ ခံစားမှုတွေပြင်းနေပါတော့သည်။မွတ်တားကတော့ မအေးသန်းကို အားရပါးရပင်ဆောင့်ပေးနေပါတော့သည်။ဒီလိုဖြင့် ညကပိုပြီးမှောင်လို့လာပါပြီ။အချိန်ကလည်းတဖြေးဖြေးည(၈)နာရီပင်ကျော်၍ လာခဲ့လေပြီ။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် ည(၁၁)နာရီလောက်မှ အစပြု၍ အလုပ်ဖြစ်ကြသည်။အခုတော့ ထိုအချိန်ထိပင် မစောင့်နိုင်ကြပါ။သောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းနေပါတော့သည်။တကယ်တော့ သူတို့ကို အရက်ခိုး အရက်ငွေ့တို့ကလွှမ်းမိုးနေသည် မဟုတ်ပါလား။ မအေးသန်းသည် အားမလိုအားမရဖြင့် ကုတင်တိုင်ကို လက်နဲ့ဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်မိသည်။ထိုအချိန်တွင်တော့ မွတ်တားက အနားမပေးတော့ဘဲစိတ်ပါလက်ပါဖြင့် ဆောင့်သွင်းနေပါတော့သည်။
18. “….အဟင့်…….ကိုမွတ်တား…..”တခါတလေ ဤလိုပင် အသံလေးများပေါ်ထွက်၍လာတတ်သည်။မွတ်တားကတော့သဲသဲမဲမဲဖြစ်နေပြီး ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက်ကတော့ အလွန်ပင် အနေရအထိုင်ရခက်နေပါတော့သည်။ တကယ်တော့ ခင်ခင်စန်းသည် မမျှော်လင့်ဘဲ အစဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။အခုလို စိတ်က သောင်းကျန်းလာတော့လဲ ခက်နေပါသည်။မတွေ့မမြင်ရရင်တော့ တော်သေးသည်။အခုမှတော့ မကြည့်ဘဲနဲ့လဲ နေလို့မရတော့ပါ။ကြည့်ပြန်တော့လဲ မျက်စိရှေ့တွင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြသည်။ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် အနေခက်နေသလောက် မွတ်တားနှင့်မအေးသန်းတို့အဖို့ကတော့ မခက်ပါ။အလွန်ပင်လွယ်ပြီး အလွန်ပင် လွတ်လပ်လို့သောင်းကျန်းလို့ ကောင်းနေပါသည်။“……ဖွတ်…..ဖွတ…….ဖွတ်……”်အသံမှာ ပြင်းပြီးတအိမ်လုံး သွက်သွက်ခါ၍သွားသည်။အတန်ကြာသောအခါတွင်တော့ငြိမ်၍သွားသည်။မွတ်တားက မအေးသန်း၏ကိုယ်ပေါ်တွင် ငြိမ်သက်စွာဖြင့် ရောက်၍သွားသည်။ခင်ခင်စန်းသည် သက်ပြင်းကိုချလျက် ပြီးတော့ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးမှေးနေမိပါတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် တလောကလုံး တိတ်ဆိတ်၍ သွားပြန်သည်။နာရီမှာလဲတနာရီရှိပြီး တနာရီ ဖြတ်ကျော်သွား၏။တဖက်ခန်းမှ တခေါခေါနှင့်အားရပါးရအိပ်မောကျသံကို ခင်ခင်စန်းကကြားရသောအခါတွင်တော့ စိတ်မငြိမ်တငြိမ်နှင့်မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်ပါတော့သည်။ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး နာရီဝက်ခန့်ကြာသော
19. အခါတွင်တော့ အိမ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုနှင့် အသဲယားစရာကလေးများ ရင်ထဲမှာခံစားလာရပါသည်။တကယ်တော့ မွတ်တားက ဒီညအဖို့ အကွက်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုအကြောင်းကို မည်သူမျှ မရိပ်စားမိပါ။ မအေးသန်းကို အရက်များတိုက်ထားပြီး လောကကြီးကို ခဏမေ့ထားစေသည်မဟုတ်ပါလား။ခုတော့ မအေးသန်းသည် တော်တော်နှင့်နိုးတော့မည် မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့်ပင် မွတ်တားသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် အတိုင်းပင် ခင်ခင်စန်းရှိရာသို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ အိပ်မက်မက်နေသလိုဖြစ်နေသည်။ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားနေရမှန်း မသိပါ။ အမှန်ကတော့ မွတ်တားက ခင်ခင်စန်းအား အင်္ကျီများဆွဲချွတ်ကာ မို့မောက်မာတောင်နေသော သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို အားပါးတရပင် ပွတ်သပ်ဆုတ်ချေနေပြီးခင်ခင်စန်း၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကိုလဲ စုပ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ အိပ်ပျော်ကာစလို ဖြစ်နေသောကြောင့် ဘယ်လိုဝေဒနာခံစား၍ ဘာဖြစ်နေသည်ကို မသိသလိုဖြစ်နေသည်။ထိုအချိန်တွင် တဖက်ခန်းမှတခေါခေါနှင့် ဟောက်ကာ အိပ်ပျော်နေသော မအေးသန်း တစ်ယောက်ကတော့လောကကြီးကို ခေတ္တမျှ မေ့၍ နေလေပြီဖြစ်သည်။ မွတ်တားသည် ခင်ခင်စန်း၏ အဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်ပွတ်လိုက်သောအခါတွင်တော့ မွတ်တား၏လက်ဖဝါးအောက်မှ ခင်ခင်စန်း၏ အဖုတ်လေးသည် ဖေါင်းပြီးကြွရွ တက်လာပါသည်။မွတ်တားက ဆက်၍ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပွတ်ပေးသည်။ ခင်ခင်စန်း၏ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းလေးကို စမ်းပြီး မထိတထိနှင့်ပွတ်ပေးသည်။ခင်ခင်စန်း၏အသက်ရှုသံတွေမှာ ပို၍ပြင်းထန်လာသည်။ထိုကမှတဆင့်မကြာမှီမှာပင် မွတ်တားသည် ခင်ခင်စန်း၏ လုံချည်ကိုဆွဲ၍ချွတ်လိုက်ပါတော့သည်။
20. တဖက်ခန်းတွင်ထွန်းထားသော မီးရောင်က တခန်းနှင့်တခန်းကြား ကာထားသော နံရံ၏အပေါ်ဖက်တွင် လက်တလုံးကြားခန့် ရိုက်ထားသောနှစ်တစ်လက်မတွေကြားမှတဆင့်ခင်ခင်စန်း၏အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်နေရာ သူမ၏မို့မောက်နေသော ရင်သားနှစ်မွှာနှင့်ဖေါင်းကြွနေသော အဖုတ်တို့ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နေရကာ ဒါတွေကိုဘဲ မွတ်တားကအားပါးတရကြည့်နေမိသည်။ သူမ၏ထဘီကို ချွတ်လိုက်သောအခါတွင်တော့ မိမွေးတိုင်းဖြစ်၍နေသောခင်ခင်စန်း၏ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးမှာ မက်မောစရာဖြစ်၍နေသည်။ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်၍နေသော ခင်ခင်စန်း၏နို့နှစ်လုံးမှာလဲတပ်မက်စရာကြီးပင်ဖြစ်သည်။ မွတ်တားသည် သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို အသာကလေးငုံ့ပြီး စို့ပေးလိုက်သောအခါတွင်တော့ ခင်ခင်စန်းမှာ ပူနွေးသောအရသာနှင့်တမျိုးပင် ဇိမ်တွေ့နေလေသည်။ မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးမှာ ထွားကြိုင်းစွာဖြင့် မာကြောလျှက် ခင်ခင်စန်း၏အဖုတ်လေးရှေ့တွင် ရစ်ဝဲလို့နေသည်။မွတ်တားသည် အသာလေးပင် ခင်ခင်စန်း၏ပေါင်ကိုကားထုတ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ လီးချောင်းကြီးထိပ်ဖြင့် သူမ၏စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့လိုက်တော့သည်။ ပြီးလျှင် ခင်ခင်စန်း၏စုဖေါင်းနေသော နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲကာ အားရပါးရထိုးသွင်းလိုက်ရာ……………..“……….ဗြစ်….” ဟူသော အက်ကွဲသော အသံနှင့်အတူ……“……အိုး…..ကျွတ……ကျွတ……အမလေး…..”်ဟူသော ခင်ခင်စန်း၏အော်သံက ထွက်၍လာသည်။ထိုအခါတွင် မွတ်တားကချက်ခြင်းပင် ခင်ခင်စန်း၏ပါးစပ်ကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် တေ့ပြီး ပိတ်ကာ စုတ်ယူလိုက်၏။
21. အဖြစ်မှန်ကို သိသော ခင်ခင်စန်းကတော့ စိတ်ပူ၍သွားသည်။ဟုတ်ပါ၏။အမေသိသွားလျှင် ဘယ်သို့နေပါမည်နည်း။“……အို….ကိုမွတ်တား…..အမေရှိတယ်လေ….”“…..ဘာမှ မပူနဲ့…မအေးအိပ်နေပြီ…..အရက်သိပ်မူးနေတယ်……နားထောင်ကြည့်လေ”ထိုအချိန်တွင် မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးကလဲ ခင်ခင်စန်းအဖုတ်တွင်းသို့ အားပါးတရနစ်မြုပ်၍ဝင်နေပေပြီ။ မွတ်တား၏စကားကြောင့် ခင်ခင်စန်းက နားစွင့်လိုက်သောအခါ မွတ်တားပြောသလိုပင် တဖက်ခန်းမှ တခေါခေါနှင့်အိပ်မောကျနေသံကိုကြားရလေသည်။“……မကောင်းပါဘူး…..ကိုမွတ်တား….ရယ်…..”“….အားကြီးကောင်းတယ်…..အားကြီးကောင်းတယ်……”မွတ်တားက ထိုသို့ပြောရင်း ဖိပြီးဆောင့်လိုက်သောအခါတွင်တော့…..“…..အို…ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ…..သိသွားရင်…ဒုက္ခပါဘဲ…”ထိုအခါတွင်တော့ အသာလေးထိုးသွင်းလိုက် ဆွဲထုတ်လိုက် လုပ်၍ပေးသည်။ခင်ခင်စန်းကတော့ စောစောကထဲက ပြင်းပြခဲ့သော စိတ်များကြောင့်အခုအခါတွင်တော့ အလွန်ပင်အရသာတွေ့နေပါသည်။ကောင်းလွန်းသောအရသာကြောင့်ပင် ခင်ခင်စန်းသည် ဒီအရသာမျိုးကို ဘယ်သို့ ဆက်ကာခံစားသွားရမည်ကို တွေးမိနေသေးသည်။ မွတ်တားကတော့ ပို၍ကဲလာလေသည်။မကြာမှီမှာပင် အိမ်သည်ပင်သိမ့်သိမ့်တုန်၍လာရလေသည်။ခင်ခင်စန်းကတော့ အလွန်ပင် အရသာတွေ့နေတော့မွတ်တားကိုဖြေးဖြေးလုပ်ဖို့မဟန့်တားတော့ပေ။ဟန့်တားဖို့လဲ ဆန္ဒကမရှိပါ။
22. ထို့ကြောင့်လဲ ခင်ခင်စန်းမှာ ကာမအရသာ လှိုင်းတွင်မိနေလေတော့သည်။မွတ်တားသည် လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းဖြင့် အားမရတော့ဘဲ ခင်ခင်စန်း၏ပေါင်ကို မြောက်ကာဆောင့်သွင်းနေသောအခါ ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် ရင်ထဲတွင် ပင်အောင့်၍ အောင့်၍သွားရပြီး လောကကြီးကို မေ့မတတ်ဖြစ်၍နေလေသည်။ “…..ဖွတ်….ပြွတ်…..ဖွတ်…..ဖတ်….ဖတ်……”အသံစုံများက ခပ်ကြမ်းကြမ်းထွက်၍နေသည်။ထိုသို့ မွတ်တားက ကြမ်းလာလေလေခင်ခင်စန်းမှာ အာသာငမ်းငမ်းတက်လေလေဖြစ်လေသည်။“…..ပြွတ်….ဖွတ်…..ဖတ်….ဖတ်…..”ဟူသော အသံများနှင့်အတူ………………“…..အို….ကိုမွတ်တား…..အင်……ဆောင့်ပါ…..နာနာဆောင့်ပေးစမ်းပါ….”့ ဟူသော တောင်းပန်သံလေး ထွက်ပေါ်၍လာသောအခါတွင်တော့ မွတ်တားကပို၍ကြမ်းကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ တဖက်ခန်းမှ မအေးသန်းကတော့ အားရပါးရကြီးကိုအိပ်မောကျတုံးပင်ဖြစ်သည်။ခင်ခင်စန်းကတော့ ခဏခဏပင် ဝေဟင်ထဲသို့လွင့်တက်သွားသလို ခံစားနေရသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုပင်…….ခင်ခင်စန်း၏ကိုယ်လုံးလေးတစ်ခုလုံးမှာလဲဓါတ်လိုက်သလို တုန်၍ တုန်၍ သွားရလေသည်။ခင်ခင်စန်းသည် မွတ်တား၏ကိုယ်လုံးကြီးကို တအားကြုံး၍ ဖက်ထားမိသည်အထိပင်ဖြစ်သည်။ မွတ်တားကလဲ ခင်ခင်စန်း၏ဆန္ဒအတိုင်းပင် တအားပင်ဆောင့်၍ကောင်းနေတုံးပင်ဖြစ်သည်။
23. အတန်ကြာသောအခါ မွတ်တားမှာ ရှုးရူးရှဲရှဲနှင့်ဖြစ်လာပြန်သည်။ပြီးတော့ သဲသဲမဲမဲဖြင့်ဆောင့်၍လာသည်။ခင်ခင်စန်းကလဲ မြင်ဖူးထားသည့်အတိုင်းပင် သူမ၏အဖုတ်ကိုကော့ကာ ကော့ကာနှင့်ပေး၍ခံနေလေသည်။ မကြာမှီမှာပင် မွတ်တားသည် သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြင့်ဖြစ်ကာ ခင်ခင်စန်း၏ကိုယ်ပေါ်သို့ကျ၍သွားပြီး လူးလွန့်ကာ ငြိမ်၍ကျသွားရပါတော့သည်။ထိုအချိန်တွင် ခင်ခင်စန်း၏မျက်လုံးလေးများသည်စင်းပြီးကျလာသည်။ မွတ်တားကတော့ ခင်ခင်စန်း၏နို့နှစ်လုံးကို ဆော့ကစားလိုက် စို့လိုက်ဖြင့်အပမ်းဖြေနေသည်။ခင်ခင်စန်းက သူမ၏မျက်လုံးလေးများကို အားယူ၍ဖွင့်ကာမွတ်တားကို ကြည့်လိုက်သည်။ “…..ကောင်းတယ်လား…” ဟု မွတ်တားက မေးလိုက်သောအခါ ခင်ခင်စန်းက ရှက်ပြုံးပြုံးပြီးတော့…..“….ကိုမွတ်တားက….သိပ်ဆိုးတယ်……မေမေ….သိတယ်နော်….မကောင်းဖူး…”“…..မသိဘူး…..ခင်စန်း….မအေး…မသိဖူး….သူသိပ်အိပ်လို့ကောင်းနေတယ်….”ဟုတ်ပါသည်။မအေးသန်း၏တခေါခေါဟောက်သံက တအိမ်လုံးကို လွှမ်းမိုး၍ထား၏။ မွတ်တားက သူ၏လီးချောင်းကြီးကို ခင်ခင်စန်း၏အဖုတ်ထဲမှ ဆွဲ၍မနှုတ်သေးဘဲ စိမ်၍ထားသည်။ခင်ခင်စန်းကလဲ မွတ်တားက သူ့လီးချောင်းကြီးကို ဆွဲ၍နှုတ်လိုက်မှာ စိုးရိမ်၍နေသည်။ မွတ်တားသည် ခင်ခင်စန်း၏နို့တွေကို ဆော့ကစားနေသည်သာမကမွတ်တားက သူမ၏အဖုတ်ကို လီးချောင်းကြီးနှင့်ပွတ်ကြိတ်ရင်း ကစားနေသည်။ ခင်ခင်စန်းကိုချရသည်မှာ မအေးသန်းကိုချရသည်ထက် ပို၍ကောင်းသည်ဟု
24. မွတ်တားက တွေးနေမိသည်။ခင်ခင်စန်း၏တောင့်တောင့်တင်းတင်း တစ်တစ်ရစ်ရစ်ကိုယ်လုံးလေးကို ချရသည်မှာ မွတ်တားအဖို့တကယ့်အရသာထူးပင် မဟုတ်ပါလား။ မွတ်တားသည် ခင်ခင်စန်း၏ပြည့်ဖြိုးသော နို့လုံးမာမာလေးကို ကစားရင်း သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်လိုက်သည်။ထို့နောက်တဖန် ခင်ခင်စန်း၏နို့သီးလေးကိုစို့လိုက်ပြန်သည်။ ထိုသို့လုပ်နေရာမှ မွတ်တား၏လီးချောင်းကြီးသည် တဖန်ပြန်၍မာကြောကာ ထလာပြန်တော့သည်။ထိုအခါတွင် ခင်ခင်စန်းအဖို့လဲ အထူးပင်ခံစားမှုလေးများပြန်၍ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ မွတ်တားက သူ၏လီးချောင်းကြီးကို ခင်ခင်စန်း၏အဖုတ်ထဲသို့အသာအယာပင် ထိုးသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်ဖြင့်လုပ်ကာ ညောင့်၍ကစားနေပြန်တော့ခင်ခင်စန်းမှာ မွတ်တား၏ကိုယ်လုံးကြီးကို တအားပင် ပြန်၍ဖက်ထားမိပြန်ပါသည်။ မွတ်တားက ဖြေးဖြေးလေးပင် ချ၍နေသည်။အခုလိုချနေသောလှေကြီးထိုးရိုးရိုးပုံစံကပင် ပို၍ကောင်းနေသလိုဖြစ်နေသည်။ခင်ခင်စန်း၏ကျဉ်းကြပ်လှသော စောက်ခေါင်းလေးကို မွတ်တားက သဘောတွေ့ကာအရသာတွေ့နေသည်။ ထိုသို့ အသာလေးချနေရာမှ မွတ်တားသည် စိတ်တွေထ၍လာပြီးခပ်သွက်သွက်လုပ်လာတော့သည်။ခင်ခင်စန်း၏နို့နှစ်လုံးမှာလဲ အသက်ရှုလိုက်တိုင်းနိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်ပြီး ကြွတက်၍နေသည်။ထိုသို့ မို့မောက်လာသောနို့နှစ်လုံးကို မွတ်တားကအားပါးတရကြီးပင် ဆုတ်နယ်ဖျစ်ညှစ်၍နေသည်။ပြီးတော့လည်း ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်၍နေသည်။“……ရွှတ…..ပြွတ်……ဖွတ်……ဖတ်…..”်
25. ဟူသော အရည်ရွှမ်း၍ မြည်လာသော အသံများက ညံစီလို့ထွက်လာသည်။မအေးသန်းကတော့ ဘာမျှမသိရှာပါ။ကာမအရသာကိုတင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်ခံစားပြီးအရက်တန်ခိုးကြောင့် လောကကြီးကို ခဏမေ့၍နေချေပြီဖြစ်သည်။ တဖက်ခန်းမှ မွတ်တားကြီးနှင့်ခင်ခင်စန်းတို့ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ဘဲ ကာမအရသာကို နှစ်ယောက်သားအလုအယက်ခံစားနေကြလေတော့သည်။ မွတ်တား၏တုတ်ဖြိုးရှည်လျား၍ မာကြောလှသော လီးချောင်းကြီးမှာခင်ခင်စန်း၏စောက်ခေါင်းဝတွင် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြင့် ဖြစ်ကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍လိုက်ရကာ ညီးတွားသံလေးများပင်ပေါ်ထွက်၍ လာရလေသည်။ ခင်ခင်စန်းကတော့ ကိုမွတ်တား၏လက်မောင်းအိုးကြီးတွေကိုလွတ်ထွက်သွားမှာစိုးသည့်အလား ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးနေပါသည်။ ခင်ခင်စန်းက ကော့ပေးလေ ကိုမွတ်တားမှာ အရသာတွေ့လေလေဖြစ်ကာခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်ဆောင့်၍ လိုးလေတော့ရာ အိမ်ကြမ်းခင်းများပင်တုန်ခါ၍နေရလေသည်။“…….ဖွတ်….ပြွတ်……ပလွတ်…..ဖွတ်….”ကိုမွတ်တားက ခင်ခင်စန်း၏စောက်ဖုတ်မှ အသံထွက်အောင်ပင် ဆောင့်၍လိုးနေသည်။အိမ်ကြမ်းခင်းလေးတွေ သိမ့်သိမ့်တုန်နေသည်သာမကဘဲ ခိုင်ခန့်လှသောကုတင်ကြီးပင် ကျီကနဲ ကျွီကနဲမြည်နေရသည်။ တဖြေးဖြေးကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်၍လာကာ အားမလိုအားမရဖြစ်၍လာသော ကိုမွတ်တားသည် ခင်ခင်စန်း၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲ၍မြောက်ကာ
26. ကားလိုက်ပြီး သူမ၏ခြေသလုံးနေရာမှ သူ၏လက်မောင်းကြီးနှစ်ဖက်ဖြင့်ခံကာအပေါ်ဖက်သို့တွန်းတင်လိုက်သောအခါ ခင်ခင်စန်း၏ဖင်သားဖွေးဖွေးအယ်အယ်ကြီးများမှာ မြောက်ကြွ၍ကော့တက်လာပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကလဲ ကားထားလေတော့ခင်ခင်စန်း၏ အရည်တွေစိုရွှဲနစ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အပေါ်သို့မော့ပေးသလိုဖြစ်သွားရုံမက ဖွင့်၍ပေးလိုက်သလိုလဲဖြစ်၍သွားရလေသည်။“…….ဟင့်…..ဆောင့်…….ဆောင့်လေ……ကိုမွတ်တား…..ဟင်…့ တအားဆောင့်စမ်းပါ…….”သူမ၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုံစံပြောင်းနေစဉ် ကိုမွတ်တားက ဆောင့်၍လိုးပေးနေသော်လည်း ဆောင့်အားက လျှော့၍သွားရသဖြင့် ရမ္မက်တွေ သည်းထန်နေသောခင်ခင်စန်းက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုမွတ်တားကလဲ အနေအထားပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍ ခင်ခင်စန်း၏အလိုကျပင် တအားဆောင့်ကာ လိုးပါလေတော့သည်။“…….ဖွတ်…..ပြွတ်…..ဖတ်……ဖွတ်…..”“…..ကိုမွတ်တား ကျမကိုလုပ်ရတာနဲ့ မေမေ့ကိုလုပ်ရတာနဲ့ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဟင်”“…..အာ…..ခင်စန်းက အများကြီးကောင်းတယ်……ခင်စန်းအဖုတ်ကသေးသေးကျဉ်းကျဉ်းလေး မွတ်တားဖြင့်သေသွားမတတ်ကောင်းလိုက်တာ….”“……..ပြွတ်…..ဖွတ်…..ပလွတ်……ဖတ်…..”“……ဟင်….ဟုတ်လဲဟုတ်ဘဲနဲ့……ဟင့်….”့ ခုလို တဟင့်ဟင့်ဖြင့် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို တတွန့်တွန့်လုပ်ကာမူနွဲ့လိုက်သောအချိန်တွင် မွတ်တားကလဲ ဒိန်းကနဲတက်လာသော ကာမဇောအဟုန်
27. ကြောင့် ခင်ခင်စန်း၏စောက်ခေါင်းထဲမှ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို အဖျားနားထိဆွဲထုတ်၍အားကုန်ဆောင့်၍ ချလိုက်ချိန်မှာတော့……………..“….အမလေး……ကိုရယ်……ဟင်……အမလေး……ကျွတ်…ကျွတ်…….”့ ဟူသော မချိတင်ကဲအသံလေးဖြင့် ခင်ခင်စန်းတစ်ယောက် ကော့ပျံတက်သွားချိန်မှာပင်မွတ်တားကလဲ ဟင်းကနဲသက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချကာ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့မှောက်၍ကျသွားကာ ခင်ခင်စန်း၏ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးကို အတင်းပင်ကြုံး၍ဖက်လိုက်လေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။(ဤစာအုပ်ကို အချစ်ရွာသူ၊ရွာသားတို့အတွက် ရည်ရွယ်ရိုက်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။)(www.mmachitywar.net)
J U U Tway Chin Hla Pe